Archive du 20200814
Mamisoa Razafindrakoto mianakavy Manaranaka ny fitiavana baolina kitra
Feno 46 taona omaly ny vodilaharana afovoanin’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra teo aloha, Mamisoa Razafindrakoto na Maitre Mamisoa.
Mahalasa saina hatrany ity resaka fangaraharahan’ny fitantanana ny raharaham-pirenena sy ny volam-panjakana eto amin’ny firenena ity, indrindra moa, fa ny
Antananarivo Tsy hita akory izay fanamboaran-dalana nodradraina
Isan’ny fanambarana nataon’ny mpitondra fanjakana Malagasy ny fikojakojana ny làlana, fanentsenana ireo lavadavaka,...
Fitsaboana Tradisionela Malagasy Hiroso amin’ny manarapenitra kokoa
Volana maromaro izay no nijoroan’ny Fitsaboana Tradisionela Malagasy teto amintsika na ny FITRAMA,
Fampindramam-bolan’ny CNaPS “Izay nanao fanambarana ara-dalàna ihany no mahazo”
Nitondra fanazavana mikasika ilay fampindramam-bola omena amin’ny alalan’ny CNaPS ny tale jeneraliny,
Harena an-kibon’ny tany Ho isan’ny mpamokatra Uranium i Madagasikara ?
Tany amin’ny taona 1947 no efa nisy ny fanamarihana nataona tompon’andraikita iray momba ny « géologie » amin’ny fisiana akora « urano-thorianite » ao ambanin’ny tanintsika Malagasy.
Fizahan-tany 2020 - 2021 Nanova drafitra ny Federasionin’ny mpiseradia
Mba tsy hisian’ny sampona vokatry ny fandalovan’ity hahamehana ara-pahasalamana eto Madagasikara ity nanova tanteraka ny drafitra ho amin’ity taom-piasana 2020-2021 ity ry zareo eo anivon’ny federasionina nasionalin’ny mpiseradia (FNG).
Lalam-pirenena Fahafito Tratra ireo roalahy mpanakan-dalana
Vosambotry ny polisin’ny FIP Toliara teny amin’ny lalam-pirenena fahafito Andatabo ny roa lahy mpanakan-dalana any amin’iny faritra iny ny 12 aogositra lasa teo tokony ho tamin’ny 01 ora atoandro.
Coronavirus 35 no maty nandritra ny herinandro
Tafiakatra 162 no namoy ny ainy vokatry ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara hatramin’ny omaly. Olona 06 vaovao indray no lavo ka 04 teto Analamanga, 01 Matsiatra Ambony, 01 Itasy.
Faritra nahitana trangana Covid 19 Mitohy ny famendrahana fanafody
Saika ireo 70%n' ireo fokontany nahitana ny valanaretina Covid 19 no namendrahana ranom-panafody teto Antananarivo Renivohitra. Ho an'ny boriborin-tany voalohany sy fahadimy dia fokontany 16 no nanatanterahana izany famendrahana ranom-panafody izany.
Fiatrehana ny Covid 19 Miara miasa akaiky amin'i Madagasikara ny UNICEF
Manohy hatrany ny fanomezana tosika ho an' i Madagasikara mandritra ny volana maro nisian' ny valanaretina Covid 19
Miaro tena ny mpitondra fanjakana Mbola “visioconférence” ny filankevitry ny minisitra
Mbola tamin’ny alalan’ny “visioconférence” no nanatanterahana ny Filankevitry ny minisitra ny 12 aogositra lasa teo, fa tsy tamin’ny alalan’ny fihaonana sy fifampidinihana an-databatra boribory.